Trusty Shops|Ostelin Vitamin D Liquid Ostelin မွေးကင်းစ/ကလေးငယ်ဗီတာမင်D အားဆေး
Product Code: oz0201
သုံးစွဲနိုင်သူ - (၁၂)နှစ်အောက် ကလေးငယ်များ။
Calcium စုပ်ယူခြင်းနှင့် ကလေးငယ် ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်သည်။ Ostelin ၏ calcium နှင့် ဗီတာမင်-D ဆိုင်ရာအားဆေးသည် လူကြိုက်များ၍ Australia တွင် professional ဖြစ်ပြီး calcium နှင့် ဗီတာမင်D အားဆေးမှအပ အခြားအားဆေးမထုတ်လုပ်ပါ။ Calcium ဓာတ်ဖြည့်စွက်ရန် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အကောင်းဆုံး အားဆေး ဖြစ်သည်။ Calcium ဓာတ်ကိုပိုမိုလွယ်ကူ လျင်မြန်စွာ စုပ်ယူနိုင်သည်။ ခန္ဓာကိုယ် ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးရေး ထောက်ပံ့ပေးပြီး အရိုးကြ့ံခိုင်ရေးကို တိုးမြှင့်ပေးသည်။ အရောင်ဆိုးဆေး၊ အနံ့မွှေးဆေး၊ Gene ပြောင်းလဲပစ္စည်း၊ ဥ၊ ပဲ၊ နို့ထုတ်ကုန်၊ sulfur dioxide နှင့် sulfite စသည်တို့လုံးဝမပါရှိပါ။
ဆောင်ရွက်ချက် - အရိုးချောင်ခြင်းမှ ထိရောက်စွာ တားမြစ်နိုင်ခြင်း၊ အရိုးအဆစ်နှင့် သွားကြ့ံခိုင်စေခြင်း၊ ကိုယ်ခံအားစနစ် ကောင်းမွန်အောင် ပ့ံပိုးနိုင်ခြင်း၊ ဗီတာမင်D မှ Calcium ဓာတ်စုပ်ယူရန်ကူညီခြင်း၊ အစာစားလိုစိတ် မြှင့်တင်ပေး၍ ဘက်စုံအာဟာရဓာတ်များ ဖြည့်စွက်ပေးခြင်း။
အဓိကပါဝင်ပစ္စည်း - ဗီတာမင် D
သုံးစွဲနည်း - အသုံးမပြုခင် ဗူးကိုလှုပ်ပေးပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်နေ့စဉ် 0.5 ml သုံးစွဲနိုင်သည်။ (သို့) အထူးကုဆရာဝန်၏ လမ်းညွှန်ချက်ဖြင့်လည်း သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။ မိခင်နှို့ ၊ နို့မှုန့်၊ သစ်သီးဖျော်ရည်တို့နှင့်ရော၍ တိုက်ကျွေးနိုင်ပါသည်။ ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းပါ။ အဖုံးဖွင့်ပြီးနောက် 40 ရက်အတွင်း ကုန်အောင် သုံးစွဲပေးပါ။
Ostelin တံဆိပ်သည် 80s ခုနှစ်၌ Australia Queensland တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး နှစ်ပေါင်း(၃၀)ကျော်အ တွင်း Ostelin သည် လူ့ခန္ဓာကိုယ် Calcium နှင့် ဗီတာမင်ဓာတ်ကို ထိန်းချုပ်ကြွယ်ဝစေရန်ရည်ရွယ်ထား ခြင်းဖြစ်သည်။ Ostelin လူကြီးသုံးCalcium အားဆေးသည် Australia ဆေးဆိုင်တိုင်း၌ အရောင်းများပြီး လူကြိုက်များသည်။ internet ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးထွန်းကားလာသည်နှင့် တရုတ်ပြည်၌ Calcium အားဆေးလိုလားမှုကြောင့်လည်း Ostelin တံဆိပ်ကုန်ပစ္စည်းမလုံလောက်သည်ထိ ရောင်းကောင်းသည်။
You're reviewing: Ostelin Vitamin D Liquid Ostelin မွေးကင်းစ/ကလေးငယ်ဗီတာမင်D အားဆေး
Blackmores Superkids Mult ...
သားသားမီးမီးများတွက် အားဆေးကောင်းကောင်းလေး တိုက်ချင်သူတွေတွက် Super kids Multi ရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။
Choose60 Chw Tabs
Nature's Way Kids Smart M ...
Nature's Way Kids Smart Multivitamin
ခန္ဓာကိုယ်တွက် အာဟာရပေါင်းစုံကိုပေးပြီး ဦးနှောက်အတွက် ငါးကြီးဆီပါဝင်သည်။
Life-Space Infant Probiot ...
NOOR VITAMINS Children's Gummies Dietary Supplement
အစာစားချင်စိတ်မရှိတဲ့ကလေးများအတွက် Noorvitamins မှထုတ်လုပ်တဲ့ Complete Children Gummies ရှိပါတယ်။
Nature's Way Kids Smart C ...
Nature's Way Kids Smart Calcium Vitamin D3
ကလေးများဧ။်အရိုးနဲ့သွားများကို ကြံံ့ခိုင်သန်မာစေပြီး အာရုံကြောနှင့် ကြွက်သားများကိုအားကောင်းစေပါတယ်